Moe Kai: အင်္ဂလန် စစ်ဆေး (သူငယ်ချင်းတုို. ဆီမှ ကြားမိသမျှ)
ဆရာဝန် တယောက် အနေနဲ.လဲ လူနာတယောက်တွေ.ရင် သူ.လူ ကိုယ့်လူရယ် လုို. ခွဲခြားခွင့် မရှိပါဘူး။ လူနာဟာ လူနာပဲပေမုို. ဘယ်သူက ဒါဏ်ရာ ပိုပြင်းတယ် ဆိုတာ ကိုပဲ ခွဲပြီး ဆေးကုသ ဖို. စတင်ရပါတယ်။ တခါတလေ ကိုယ်ရဲ. ရဲဘော် ဒါဏ်ရာကို အရင်ကြည့် ချင်ပေမယ့် ရန်သူ. ရဲဘော်က ဒါဏ်ရာ ပိုပြင်းတော့ ကိုယ့် လူကို အသာထားလို. ရန်သူကို ကုဖို.ပဲ အရင်လုပ်ရ သတဲ့။
တခါကတော့ အရမ်းဒါဏ်ရာပြင်းတဲ့ ကိုယ့်ဘက်သား လူနာရယ်၊ ရန်သူဘက်က လူနာရယ်ကို ဟယ်လီကော်ပတာ တစ်စဉ်းနဲ. ရှေ.တန်းကနေ ပြန်သယ်လာတယ်တဲ့။ ဟယ်လီကော်ပတာ တခုထဲမှာ ဒီလူနာက ၂ ယောက်။ သူတို.ကို ဆေးကုတဲ့ သူတွေ ကကု။ ဒီလူနာ၂ ယောက်ကလဲ သူတို. ရဲ. မပြီးသေးတဲ့ တိုက်ပွဲနဲ. ခြေထောက် နဲ. အချင်းချင်း ကန်ကျောက် ပြီး ရဟတ်ယဉ်ပေါ်ကနေ တွန်းချဖို. လုပ်ကြ။ ဒါနဲ. ဆေးကုဖို. ကျိုးစားနေတဲ့ သူတွေက သူတုို. ကိုဆွဲကြ ရယ်ပေါ့။